Laanta Socdaalka oo soo saartay Saadaasha Qaxootiga iyo helitaanka Dhalashada ee Sanadka Cusub | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Laanta Socdaalka oo soo saartay Saadaasha Qaxootiga iyo helitaanka Dhalashada ee Sanadka...
Laanta Socdaalka oo soo saartay Saadaasha Qaxootiga iyo helitaanka Dhalashada ee Sanadka Cusub
Hay’adda laanta socdaalka waxay saadaalisay in tirada magangalyo doonka Sweden ay sanadkan waxyar ka badnaan doonto sanadkii hore. Waxay sidoo kale filaysay in tirada codsiyada dhalashada Sweden ay badnaan doonto sannadkan, iyadoo xustay inay gaartay rikoor taariikhi ah sanadkii hore.
Qiyaastii 16,000 oo magangalyo doon ah ayaa la filayaa inay yimaadaan Iswiidhan, taasoo waxyar ka badan sidii sanadkii hore oo ay tiradu gaartay 13,000, waana heerkii ugu hooseeyay ee 20 sano. Agaasimaha Qorsheynta ee Waaxda Socdaalka, Henrik Holmer, ayaa sheegay in masiibada Corona ay sii wadi doonto saameynta tahriibka. Halka Hay’addu ay rajeynayso in wax walba caadi kusoo noqon doonaan wixii ka dambeeya xagaaga soo socda. Sida uu soo xigtay TT dhawaan.
Dhaqdhaqaaqa u dhexeeya waddamada ayaa la kulmaya dhibaatooyin sababo la xiriira aafada, maaddaama duulimaadyadii la joojiyay, dhowr waddanna ay u baahan yihiin shahaado tijaabo ah oo Corona ah. Hay’adda socdaalka waxay rajeyneysaa in ilaa 10,000 oo magangalyo doon ah ay iskood ugu laaban doonaan dalalkii ay ka yimaadeen.
Tirada codsiyada dhalashada Iswiidhan ayaa wali ah mid taariikhi ah. Sanadkii la soo dhaafay, tirada codsiyada ayaa jabiyay rikoor gaaraya 87,000, sanadkanna waxaa la filayaa inay gaaraan 73,000. Sharaxaadda ugu weyn ee tan ayaa ah inay jiraan dad aad u tiro badan oo dalbaday magangalyo sanadkii 2015. Haatan waxaa laga joogaa in ka badan shan sano tan, taas oo ah waqtiga inta badan loo baahan yahay si loo helo dhalasho. Liiska sugitaanka muwaadinimadu wuu dheer yahay. Holmer wuxuu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la hubiyo ku dhaqanka sharciga inta la baarayo codsiyada. “Jinsiyadda waa go’aan kama dambeys ah,” ayuu sharraxay. Qofku mar haduu qaato dhalashada iswiidhishka looma diidi karo dhalashada. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaan si taxaddar leh u baarno codsi kasta si aan muwaadinnimo loo siin dadka aan xaq u lahayn. ”
Sanadkii la soo dhaafay, Hay’adda Socdaalka waxay oggolaatay boqolkiiba 60 codsiyada dhalashada. Mid ka mid ah waxyaabaha u horseedi kara diidmada dalabka ayaa ah in qofka lagu helay dambi ama uu qatar ku yahay amniga.
Sannad guul leh
Sannadkan, xeerarka cusub ee soogalootiga ayaa ka dhaqan galaya Iswiidhan, halkaas oo sharciga ku-meel-gaarka ah ee ku-meel-gaadhka ah uu ku egyahay 19-ka Luulyo. Sharci cusub oo ku saabsan dalalka nabdoon ayaa la filayaa inuu dhaqan galo 1-da bisha May ee sanadkan. Midowga Yurub ayaa sidoo kale ka shaqeynaya sidii wax looga badali lahaa sharciyada la xiriira arrimaha magangalyada. Si kastaba ha noqotee, Hay’adda Socdaalka ayaan midkoodna ku xisaabtamin saadaasheeda. Dabcan, taasi waxay sameyn laheyd isbedel weyn, ayuu yiri Holmer, iyadoo kuxiran sharciga la hirgaliyay.
Hay’adda laanta socdaalka ayaa sidoo kale rumeysan in kiisaska si dhakhso leh go’aan looga gaari doono mustaqbalka. Sannadkan, waxay rajeyneysaa inay gaarto yoolka ah 90 boqolkiiba codsiyada magangelyada ee lagu xalliyey lix bilood gudahood
Previous articleMareykanka oo ka walaacsan arimaha Doorashada war cadna ka soo saaray
Next articleAqalka sare ee Mareykanka oo ka wal walsan in Doorashada Soomaaliya dhiig badan ku daato
Wararka ka imaanaya deegaanno ka tirsan koofurta gobalka Mudug ayaa sheegaya, in halkaasi ay ka jirto abaar ba’an oo saameyn ku yeelatay nolasha dadka...
Wasiirka Warfaafinta oo Tacsi u Diray Marxuum Fanaan Cabdi Qaboojiye...
Ra iisal wasarae xil siihaayaha oo Wasiiro xilalka isagu badalay